Peeji Ọsọ na Ndị ọbịa Gị | Martech Zone
Peeji Ọsọ na ndị ọbịa gị
Satọde, Ọgọstụ 6, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ndị siri ike ma ọ bụ dị oke ọnụ na mmetụta bụ ọsọ ọsọ nke saịtị gị na-ebu. Nke a bụ agha a na - alụ ọgụ ebe a na Martech… mmekọrịta ọha na eze na mgbasa ozi na-eme ka ibe akwụkwọ ghara ịnwe oge, na-agbada, n'ihi ya, anyị na-anwa ịmegharị ya site n'ọtụtụ ụzọ. Anyị maara na anyị efunahụ ụfọdụ ndị ọbịa na ya - ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ okporo ụzọ.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ anaghị ewe oge dị oke mkpa, mana ọ nwere mmetụta dị ukwuu na saịtị gị nwere ike itinye aka na ịgbanwe ndị ahịa. Ileba anya, Kissmetrics tinye akwụkwọ ozi a nke gosipụtara ihe ọghọm.
Ọ bụrụ na saịtị e-commerce na-eme $ 100,000 kwa ụbọchị, a Oge nkwụsị nke abụọ nke abụọ nwere ike ịme gị $ 1 nde na ahịa furu efu kwa afọ.
Tags: ERPeduogologo akarasagendu ndu ndutelivishọn
Gini mere eji eji ihe omuma?
Mejuputa a Nseta ihuenyo thumbnail Ọrụ